7 Torohevitra hialana amin'ny mpangarom-paosy any Eropa | Save A Train
an-trano > Torohevitra momba ny dia > 7 Torohevitra hialana amin'ny mpangarom-paosy any Eropa
(Last Nohavaozina: 22/10/2021)
Tanana tantaram-pitiavana taloha, zaridaina mahafinaritra, efamira tsara tarehy, mahasarika mpizaha tany an-tapitrisany ho any Eoropa isan'andro. Ireo mpitsangatsangana manerana an'izao tontolo izao dia mitsidika an'i Eropa hijery ny tantarany sy ny hatsarany ary mahita ny tenany ho voafantina amin'ny fikafika maranitra any amin'ireo tsangambato eropeana malaza. Mitandrema mandritra ny dia mahafinaritra anao amin'ny fanarahana ireto toro-hevitra ireto mba hialana amin'ny mpangarom-paosy any Eoropa.
1. Torohevitra hialana amin'ny mpangarom-paosy: Fantaro ireo faritra mampidi-doza
Ny fahalalana ny toerana alehanao dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fananana fotoana tsara indrindra amin'ny fiainanao. Noho izany, rehefa mikasa ny fialan-tsasatrao any Italia na any Frantsa ianao, tokony hikaroka ireo toerana tsy maintsy jerena ianao ary koa ireo toerana mampidi-doza. Tsy misy antony tokony hatahorana, tsy hahita ady amin'ny andian-jiolahy ianao, fa ny toerana aleha dia misy toerana saropady avokoa, izay ilain’ny mpizaha tany ny mijery manokana ny entany sy ny fitandremana ireo mpangarom-paosy.
amin'ny ankapobeny, ireo toerana tokony hitandremanao, dia toerana toy ny tsena parasy, kianja malaza be atao, SY fitateram-bahoaka toerana. Ny iraisan'ireo toerana rehetra ireo dia tena be olona izy ireo, ka eo am-pijerena ny Eiffel Tower na Katedraly Milan, mora midona aminao ny mpangarom-paosy, ary afaka segondra vitsy dia very ny kitapom-bolanao. Ny fahalalana ny manodidina anao sy ny valalabemandry dia tendrony ambony hisorohana ny mpangarom-paosy any Eropa.
2. Fikarohana sy paikady fakana poketra
Ilay vahiny tsara tarehy na fikafika faran'izay tsara 2 amin'ireo hosoka mpangarom-paosy mahazatra indrindra any Eropa. Tahaka ny tanànan'ny eropeana rehetra misy majika mahafinaritra sy mahavariana, toy izany koa amin'ny fikafika pickpocketing mampiavaka azy. Ary noho izany, raha te hitandrina ny fanananao sarobidy ianao, fikarohana mialoha momba ny fisolokiana harom-paosy mahazatra any amin'ny toerana halehanao.
Ohatra fanampiny ho an'ny hosoka mpangarom-paosy dia ilay vahiny tsara tarehy mangataka fotoana na lalana. Raha mijery ny sarintany ianao, na mijery, manakaiky izy ireo ary maka izay rehetra ao am-paosinao na ao anaty kitaponao. Noho izany, mitandrema ary aza lavo amin'ny iray amin'ireo 12 fisolokiana lehibe eto amin'izao tontolo izao.
Berlin mankany Londres miaraka amin'ny lamasinina
Bruxelles Ho any Londres miaraka amina lamasinina
3. Torohevitra hialana amin'ny mpangarom-paosy: Avelao ny entana sarobidy ao amin'ny Hotely
Miala amin'ny pasipaoro, carte de crédit, ary ny firavaka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia iray amin'ireo toro-hevitra ambony indrindra hisorohana ny mpangarom-paosy any Eoropa. Araka ny voalaza eo anatrehan'i, Ny mpangarom-paosy dia manana talenta amin'ny fahafantarana tsara hoe aiza no ahitana entana sarobidy nefa tsy hitan'ny mpizaha tany mihitsy. Ary, anio rehefa afaka manana kopia pasipaoronao amin'ny mailaka na telefaona ianao, na manofa tapakila fitsangatsanganana an-tserasera, tsy misy antony hitondrana ny vola na ny carte de crédit rehetra.
Noho izany, alohan'ny handehananao hivezivezy any amin'ny iray tsena parasy tsara indrindra any Eropa, ny vola ihany no raiso. Tsy misy antony tokony hitondrana ny carte de crédit rehetra ihany koa, fa raha manizingizina ianao, manaparitaka vola sy karatra amin'ny paosy anatiny samihafa na fehikibo vola.
4. Tazomy ao anaty paosy anatiny ny zava-dehibe indrindra
Ny fehikibo vola amin'ny andro fahavaratra na ny paosin'ny palitao anatiny dia fomba tsara hiarovana ny entanao sarobidy. Mora tanterahina ity fikafika ity rehefa manao sosona ianao, mandritra ny fararano na ririnina ary mety tsy mahazo aina rehefa mafana sy mando ny andro.
Azonao atao ny mividy fehin-kibo amin'ny fitsangatsanganana na fivarotana fahatsiarovana ao an-trano na mandritra ny dia, ohatra amin'ny gara na seranam-piaramanidina afovoany. Ny tombony amin'ny fitazonana zavatra ao anaty paosy dia miharihary, mpangarom-paosy mety hidona ao aminao, fa tsy hahavita hihoatra ny paosin'ny pataloha jeans. Atỳ, azonao atao ny manohy mandehandeha am-pifaliana sy mizaha ireo tsangambato mahafinaritra any Eropa.
5. Mitondrà kitapo miampita vatana, Tsy kitapom-batsy
Rehefa mandehandeha eny amin'ireo lalantsara Eoropeana mahafinaritra, na mijoro mifanaraka amin'ny Louvre dia tokony hahazo aina ianao. Ny fanaovana kiraro ahazoana aina dia zava-dehibe toy ny fananana kitapo miampita vatana rehefa mandeha. Ny kitapo vita amin'ny hoditra dia midika hoe dia tsy misy ahiahy, satria tsy mila mijery eny an-tsorony ianao mba hahitana raha misy olona mitsambikina eo amboninao amin'ny filaharana feno olona.
Ary, azonao alaina fotsiny ny tavoahangin-drano na ny poketra amin'ny kitapo hazo. Noho izany, Ny mitondra kitapo hazo dia mety indrindra mba hisorohana ny harom-paosy any Eoropa, ary koa ny fitsangantsanganana mora sy mora.
6. Torohevitra hialana amin'ny mpangarom-paosy: Miakanjo sy manaova toy ny eo an-toerana
Ny iray amin'ireo zavatra manome mpizahatany lavitra ho an'ny pickpockets manam-pahaizana dia ny lamaody fizahan-tany tsy manam-paharoa: paosy, akanjo fanatanjahan-tena, ary manao toy ny mpizahatany. Ny katedraly, efajoro taloha, ary maro amin'ireo mari-pamantarana any Eorôpa no tena mampitolagaga ka ny mpizaha tany matetika mijanona sy mijery fotsiny, na maka sary an-jatony.
Ny toro-hevitra tsara indrindra hialana amin'ny pickpocketing any Eropa dia ny mifangaro amin'ny vahoaka eo an-toerana. Ary noho izany, toy ny mijery mialoha ny toerana tsara indrindra tsidihina amin'ny toerana halehanao, jereo ny fironana sy ny kolontsaina eo an-toerana.
7. Torohevitra hialana amin'ny mpangarom-paosy: Manana fiantohana amin'ny dia
Mahazo fiantohana amin'ny dia alohan'ny dia dia tena ilaina. Androany dia azonao atao ny miantoka ny fanananao sarobidy sy ny entanao, sao sanatria very na amin'ity, angalarina. Ny fiantohana fitsangantsanganana dia mety ho mpamonjy aina raha angalarina ny kitapom-bolanao sy ny karatrao, any an-tany hafa tsy misy olona hanavotra.
In conclusion, ny fitsangatsanganana dia fomba tsara hijerena ireo kolontsaina, firenena ary mahita fomba fijery mahatalanjona. Mahavariana ny ankamaroan'ny traikefa fitsangatsanganana ary tsy fahita firy ny fisian'ny mpizaha tany amin'ny harom-paosy any Eoropa. na izany aza, tsara foana ny miomana sy mandray fepetra, toy ny fanarahana ny toro-hevitray momba ny fomba hisorohana ny pickpocketing any Eropa.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao hanomana fialan-tsasatra azo antoka sy tsy hay hadinoina na aiza na aiza any Eoropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Torohevitra hialana amin'ny pickpocket any Eropa” ve ianao eo amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-avoid-pickpockets-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)